siddhartha insurance(siddhartha insurance) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
किन खुम्चियो सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको जगेडा कोष ?
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २२ करोड १३ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यो बिमा कम्पनीको नाफा १८ करोड ६० लाखमा सीमित थियो । समीक्षा अवधिमा सिद्धार्थले ७२ करोड ८६ लाख बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ । पुनर्बिमा कमिसनबाट १९ करोड ३६ लाख, लगानी, कर्जा तथा अन्यबाट ४ करोड ७५ लाख आम्दानी गर्न सफल...
१६८४ प्रतिकित्ताको सेयर सस्तोमै उठाउने हो कि ?
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा हिजोआज बिमा कम्पनीहरुको दबदबा छ । बिमा कम्पनीहरुले ठूलो परिमाणमा हकप्रद र बोनस सेयर जारी गर्ने गरी पूँजीवृद्धि योजना बिमा समितिमा बुुझाएपछि त्यस्ता कम्पनीका सेयरमा मरिहत्ते गर्ने लगानीकर्ता धेरै छन् । यही क्रममा दोश्रो बजारमा तछाडमछाड गर्नुभन्दा बुद्धि पुर्याएर सस्तोमै एक बिमा कम्पनीको सेयर लिलामीबाट खरीद...
रु. १६५० प्रतिकित्ताको सेयर लिलामीमा, सस्तोमै पर्नसक्छ !
बैशाख २८ देखि सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको हकप्रद
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले आगामी बैशाख २८ गतेदेखि धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत १९.२३ प्रतिशत हकप्रद सेयरको निश्कासन गर्ने भएको छ । यो बिमा कम्पनीले १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका कुल ८ लाख ६२ हजार १ सय २५ कित्ता हकप्रद निश्कासन गर्ने भएको हो । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका सेयरधनीले बैशाख २८ गतेदेखि जेठ ३१ भित्र हकप्रदका लागि आवेदन...
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले ३० प्रतिशत लाभांश बाँड्ने
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ इन्स्योेरेन्स लिमीटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई ३० प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । कात्तिक १९ गते बसेको कम्पनीको बोर्ड बैठकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई ३० प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरिएको हो । यो निर्णय बिमा समिति र कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पास भएपछि मात्र...